Waxannu ku doorannahay idilkood – Personlig Assistans Malmö
Till Paris för Barncancerfonden
Vi behöver fler hjältar!
Lagändring i LSS
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59 kontakt@hadicare.com
Detta hjälper vi dig med
Våra fördelar A-Ö
Arrimo annaga nagu saabsan
Sidan ayaad ku noqonaysaa macmiil
Waxannu kaa caawinaynnaa
Waxannu ku doorannahay idilkood
Kako postati korisnik/mušterija
Mi vam možemo pomoći u sljedećem
Naše prednosti od A – Ž
Nasze atuty od A‑Z
Tak zostaniesz klientem
W tym moźemy Ci pomóc
هكذا تصبح زبوناً
ميزاتنا، من الألف إلى الياء
نحن نساعدك في تقديم طلب تعويض المساعدة الشخصية
Waa nala citi­raaf­sa­ny­a­hay
Shir­kad­da Hadi­Ca­re AB waxa citi­raaf­san oo ay ka dii­waang­ashan­ta­hay wakaa­lad­da arri­ma­ha bulsh­da IVO (hore loo yaqaan­ney Socialstyrelsen).
Had­dii aan ka soo qaad­no in aadan nagu qan­cin waxa kuu suu­ro­gal ah in aad u ware­eg­tid cid­dii kale ee aad jeces­ha­hay. Waxa noo deg­gan xil­li kala­gu­ur oo sedex bilood ah.
Dhac­do kas­ta oo muhim ah kuna saab­san loo-ade­e­ga­ha waxn­nu gelin­naa nadaam­ka dii­waangelin­ta dhacdo-maalmeedka.
Had­daan­nu nahay shir­kad­da Hadi­Ca­re AB wax­an­nu lee­na­hay dam­maa­nad noo gaar ah oo ku waja­han macaa­mi­ishay­a­da iyo shaqaa­la­hay­a­ga­ba, taas oo ah; In aan­nu mar­kas­ta­ba shaqa­da ku saab­san kal­kaalin­taa­da u gudan­no sida kuu­gu hab­boon ee noo suu­ra­gal ah.
Baax­ad­da shir­kad­da Hadi­Ca­re AB wax­ay gaad­h­si­i­san­ta­hay dacal­la­da Sve­ri­ge wax­a­na aan­nu aad u qii­may­nayn­naa in aan­nu xid­hi­idh shak­hsi ah (toos ah) la yee­lan­no loo-ade­e­gay­aasha iyo shaqaa­la­hay­a­ga. Wax­an­nu rab­naa in aan­nu si gaar ah kuu­la kulan­no meel kas­ta oo aad deg­gan­ta­hay­ba, ha ahaa­to Sol­l­ef­teå ama Smygehuk.
Awood xir­fa­deed leh
Shaqaa­la­hay­a­gu wax­ay xir­fad iyo khi­brad u leey­i­hi­in dhi­na­cyo kala duwan. Wax­an­nu kale oo lee­na­hay khi­brad ku dhi­san dhaqam­mo kala duwan iyo aqoon buls­ho oo noo fudud­sy­naya in aan­nu ku dhawr­ro oo kugu­la dhaqan­no rabitaankaaga.
Hadi­Ca­re AB wax­ay ka shaqa­gashaa dham­maan dal­ka Sve­ri­ge wax­a­na aan­nu gelin­naa awood badan in aan­nu u dho­waan­no macaa­mi­ishay­a­da. Inkas­ta oo xafi­is­kay­a­ga way­ni ku yaal­lo magaa­la­da Mal­mö waan­nu kuu dhowna­hay mar wal­ba aad joog­tid Boden ama Brö­sarp. Adi­gu­na had­daad loo-ade­e­ge noo tahay wax­an­nu mar­wal­ba kuu damaa­na-qaa­dayn­naa mucaa­ma­lo gaar ah.
Kala duwa­naan dhaqan
Kala duwa­naan­ta dhaqan­ka ka jir­ta xafi­is­kay­a­ga gudi­hi­i­sa iyo debed­di­i­sa­ba wax­an­nu sii­nayn­naa mud­naan gaar ah iyo dhi­ir­ri­ge­lin. Taa­si­na waa qaab aan­nu u qii­mayn­nayn­no oo dhi­ir­ri­ge­li­nayn­no ikhti­raaca iyo feker-cus­boo­nay­si­in­ta ku qar­soon ruux kas­ta oo dad­ka ka mid ah.
Had­daan­nu nahay Hadi­Ca­re AB wax­an­nu shaqa­day­a­da sii­nayn­naa muhim­mad­dee­da iyo masu­u­liy­ad­dee­da oo ay ku dhe­e­han­ta­hay tix­ge­lin bada­ni. Sidaas oo ay tahay had­da­na mar­wal­ba wax­an­nu meel u hayn­naa qosol, maa­deyn iyo qal­bi­ddi­ir­ranaan aan­naan ku kala bakhaylayn.
Dad­ka nala sheqe­eya waxa laga helay­aa aqoon-afeed oo balaad­han. Ka sokow luqa­da­ha ingri­is­ka, jar­mal­ka, iyo in yar oo dha­nish ah wax­an­nu ku hadal­laa luqad­da­ha bosni­ga, koro­wa­ti­ga, cara­bi­ga iyo isbanishka.
Xil­li­ga shaqa­da wax­ad xid­hi­idh toos ah la samayn kar­taa badi­ba shaqaa­la­hay­a­ga. Xil­li­ga shaqa­da ka dib wax­ad wici kar­taa nam­bar hee­gan ah oo u gaar ah arri­ma­ha deg­deg­ga ah. Waxa kale oo aad naga­la soo xid­hi­id­hi kar­taa web­kan shir­kad­da qayb­ti­i­sa she­e­k­ay­si­ga (chatt­funk­tion).
Had­daan­nu nahay shaqaa­la­ha Hadi­Ca­re AB wax­an­nu khi­brad san­na­do badan ah u lee­na­hay kal­kaalin­ta, dhac­dooyin­ka kal­kaalin­ta badi­doodu­na way na soo mareen. Wax­an­nu baran­nay cil­mi­ga buls­ha­da, aqoon­ta shar­ciy­a­da iyo dhaqaa­la­ha wax­a­na aan­nu khi­brad u leen­na­hay dhaqam­mo kala duwan iyo aqoon­ta bulshada.
Arrimo anna­ga nagu saabsan
Naga­la soo xiriir
Sidan ayaad ku noqo­nay­saa macmiil
Wax­an­nu kaa caawinaynnaa
Wax­an­nu ku doo­ran­na­hay idilkood
Timlista: FK | Kommun
IT-support: AR | SV
Telefon: 040-97 91 59
Fax: 040-12 51 10
Post: Box 176 07, 200 10 Malmö
Besök: Helmfeltsgatan 2, Malmö
en del av Hadisen Group